Markay tahay 27, Caroline waa haweeney firfircoon oo dhallinyar ah, kaaliye kalkaaliye caafimaad oo hore oo loo beddelay Kaaliyaha Xoghayaha ka dib koorso hal sano ah oo tababar ah IFOCOP iyada oo loo marayo barnaamijyada daraasad shaqo. Iyada oo ay isha ku hayso shaqaalaheeda, Guillaume Mundt, ayay iyada khibraddeeda nala wadaagaysaa.
Caroline, xilkee hada haysaa?
Waxaan u shaqeeyaa Kaaliyaha Xoghayaha ee Saveurs Parisiennes, oo ah shirkad yar oo heer sare ah oo wax u qabata cuntada oo ku taal Eragny-sur-Oise (Val d'Oise). Waxaa jira 4 naga mid ah oo ka shaqeynaya shirkaddan, oo uu aasaasay 2015-kii, sayidkayga, Guillaume Mundt, oo maanta jooga.
Waa maxay howl maalmeedkaagu?
Caroline: Wax kasta oo lagu garto tilmaanta shaqada dhaqameed ee Xogheye-Caawiye: maamulo badan, xisaab yar, xiriirka macaamiisha, arrimaha sharciga ... Shaqada xafiiska sidii aan raadinaayey waqtiga si aan dib ugu tababarto naftayda, iyo ka dib markaan shaqeeyay dhowr sano ahaan daryeele ahaan. Waa inaan sheegaa inaan si gaar ah u bogaadinayo ku soo noqoshada laxanka shaqada, oo hadda la jaan qaadaya noloshayda gaarka ah. Kaliya maahan inaan ka helo shaqadan, sidoo kale waxay 100% la jaanqaadaysaa nolosha qoyska.
Guillaume: Kulankeennii ugu horreeyay, Caroline waxay ahayd ...
Tababar kale: wareysiga shaqaaleeyaha ee isweydaarsiga July 10th, 2021Tranquillus
READ Excel bilaash ah: sida loo abuuro unug cusub?
horeCunto bixinta inta lagu guda jiro Covid-19: shaqaaluhu way ku cuni karaan goobaha shaqada
socdaLaga soo bilaabo shaqaale ilaa maamule ganacsi: soo ogow safarka cajiibka ah ee Thierry